Armaa Samsam la xabaal nololyey, war bal xabsiga eega!!
J.B. "Shabeel yare"
Mahad ilaah baa leh,nabadgalyo nabi maxamed korkiisa ha ahaato.
Arintaan lagula dhaqmay Innanta yar oo ardayadda ah Samsam Axmed Ducaale oo ku soo habowday maamul ku sheega Somalilayn ninka ku xigeenka inna Riyaale iyo askarta maamulkiisa ee isugu jira farxunmaynta,,jirdilka iyo jowfarka kale ee marnaba ka xaarasan dhaqanka Somaliyeed,diinta Islaamka iyo shuruucda iyo qawaaniinta u degsan xuququl insaanka aadanaha oo dhan (human rights).
Waxaan halkaan aanu ka cambaraynaynaa mamulka madax dhul la dhaca ah oo cadaystay in uu dhagaha ka furaysto Codka Shacabka Somaliyeed oo aduunka afartiisa dacal mar kaliya Ooda soo jabiyey iyo waliba Hay`adha Caalamiga ah oo u dooda xuquuqda Aadanaha,kuwaasoo ay ugu dambeeyeen Afartii Qareen oo Xabsiga loo taxaabay,malaha dhaqanka xabsigaa Hargaysaad iyo Tacadiyadda loo gaysto mawaadiniinta Soomaaliyeed kaba xun AL-Quraybkii Ciraaq.
Waxaanu u sheegaynaa mamulka magac u yaalka ah ee inna Riyaale oo Maxasta,Maatada iyo Birmagaydada Somaaliyeed shafka u garaacay in uu gumaado oo gowrac ku jiido in ay masúuliyadeeda ay qaadayaan iyaga oo qura ee ay na la wadaagin shacabka rayadka ah in kastoo dadka Somaaliyeed is waydiinayaan tolow waxa ay u aamuseen shacabka reer waqooyi Galbeed haday lahaayeen Culimo,Caamo, Ciroole, Caaqilo, Salaadin iyo waliba Indheer-G.iyo aqoonyahan.
Iyada waanu garanay oo araganay aamuska saxaafadda iyo garba gorayaynta ay ku sameeyeen Sasam.
Intaa waxaa ii raaca,waxaan halkaan mahad uga soo jeedinayaa Innanta Raaqiyo Oamaar sida Codkeeda ay ugu dheeraysatay iyo waliba Jamaahiirta Soomaaliyeed ee ka dhiidhiyey Fawaaxishka Foosha xun oo Qowlaysatadu kula kacday Ardayadda yar Samsam ee ka dul dhacday ayadoo habow ah Godka Mici- gamaaraydu ku uus xabaalatay.
Waxaa markhaati ma doonto ah in mamulka in Riyaale ay isga qasanyihiin xurgufta u dhaxaysa Puntland iyo Soomali wayn oo meel ah iyo ka falaagowga Somalilayn oo meel ah taasoo ay ku dabakheen in ay dhibaato iyo Qunjuraaf baas ay kula gurya noqdeen dadka birmagaydada ah sida dhalaanka yar yar oo Samsam oo kale ah iyo shacabka rayadka ah oo aan is difaaci karin.
Xiqiiqadii waxaan ku waafaqsanahay intii iyo oraahdii ay ka yiraahdeen dadka faraha badan oo Soomaliyeed oo wax ka yiri ayagoo cabiraya damiirkooda Bini'aadantinimo,waxaana ka mid ahaa erayada hoos ku xusan:.
"Dhibaatada gaartay gabadhaas waxaa dhabarka u ridanaya madaxweyne ku-xigeenka oo gurigiisa laga watay, taliyaha booliska, xeer ilaaliyaha guud, guddoomiya maxkamadda, askarta faraxumeysay iyo guud ahaan xukuumadda Somaliland laakiin marna dadweynaha caadigaa shuqul kuma laha"